काठमाडौँ । अजोड ईन्स्योरेन्स लिमिटेडले आज आफ्नो दोस्रो बार्षिकोत्सव सम्पन्न गरेको छ । कम्पनी संचालनमा आएको छोटो अवधिमा नै १ प्रधान कार्यालय ७ वटा प्रादेशिक कार्यालय तथा १८ वटा शाखा कार्यालय, १६ वटा उपशाखा कार्यालय गरि जम्मा ४२ वटा कार्यालयहरु, ३ वटा तेश्रो …
राष्ट्रिय बीमा संस्थानमा काठमाडौँ महानगरका कर्मचारीहरुको जीवन बीमा
काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरुको सामूहिक सावधिक जीवन बीमा गर्ने सम्वन्धमा विहीत्रबार महानगरपालिका र राष्ट्रिय बीमा संस्थान बीच सम्झौता सम्पन्न भएको छ । सम्झौतामा महानगरपालिकाको तर्फबाट प्रशासन विभागका विभागीय प्रमुख नमराज ढकाल र संस्थानको तर्फबाट नायव महाप्रवन्धक महेश रिमालले हस्ताक्षर गरेका छन् …
एनआईसी एशिया बैंकद्वारा रू. ३० लाख घातक रोग बीमा दावी रकम भुक्तानी
काठमाडौँ । एनआईसी एशिया बैंकले घातक रोग उपचार बीमा वापत दुई जना ग्राहकहरूलाई रू. १५ लाख प्रतिव्यक्तिका दरले रू. ३० लाख बीमा रकम भुक्तानी गरेको छ । चमत्कारिक बचत खाता ‘डायमण्ड’ श्रेणीमा खाता खालेका नवलपरासी भुमई निवासी दीपक श्रेष्ठलाई क्यान्सर रोगको उपचार वापत …
अजोड इन्स्योरेन्सलाई ३० करोडको आइपीओ जारी गर्ने अनुमति, नयाँ बीमा कम्पनीमा पहिलो आइपीओ
काठमाडौं । अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीले आइपीओ जारी गर्ने अनुमति पाएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले अजोडलाई ३० लाख कित्ता अर्थात ३० करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरको आइपीओ निष्काशन गर्ने अनुमति दिएको हो । एक अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको कम्पनीले ३० प्रतिशतले हुने ३० …
बीमा समितिको निर्देशन- ‘कम्पनीहरुले कोषको रकम सिधै बाणिज्य बैंकमा राख्न सक्ने’
काठमाडौँ । बीमा कम्पनीहरुले टेक्निकल रिभर्ज कोषको रकम अब सिधै ‘क’ बर्गका बाणिज्य बैंकमा मुद्दति निक्षेपमा राख्न सक्ने भएका छन् । बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले आज इजाजत प्राप्त सबै बीमा कम्पनीहरुलाई निर्देशन जारी गर्दै कोरोना भाइरसको कारण पूर्व स्वीकृति दिन नसकिएकोले …
प्राइम लाइफको वार्षिक साधारण सभा असार २९ गते, १२.५ प्रतिशत बोनस शेयर पारित गर्ने
काठमाडौँ । प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको १२औँ वार्षिक साधारण सभा असार २९ गते हुने भएको छ । दिउँसो २ बजे अग्रवाल भवन कमलपोखरीमा वार्षिका साधारण सभा गर्ने निर्णय भएको कम्पनी सचिव राजनप्रसाद अधिकारीले जनाएका छन् । साधारण सभाले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को नाफाबाट …
कोरोना जोखिमका बीच नेपाल इन्स्योरेन्सले सम्पन्न गर्यो साधारणसभा, लाभांश प्रस्ताव पारित
काठमाडौं । नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीले लाभांशसम्वन्धी प्रस्ताव पारित गरेको छ । कम्पनीको शुक्रबार सम्पन्न ७१औं वार्षिक साधारणसभाले सो प्रस्ताव पारित गरेको हो । कोरोना संक्रमणको जोखिमका बीच पनि कम्पनीले सुरक्षात्मक विधि अपनाएर कमलादीस्थित आफ्नो पूरानो भवनमा सभा सम्पन्न गरेको हो । यसअघि चैत …
काठमाडौँ । ज्योति लाईफले ग्राहकहरुलाई आफ्ना बीमा योजना सम्बन्धी सरल र विस्तृत जानकारीको लागि नेपाली जीवन बीमा उद्योगमा नै नौलो प्रयोगको रुपमा पहिलो पटक एनिमेसन भिडियो सार्वजनिक गरेको छ । ज्योति सुरक्षित भविष्य जीवन बीमा योजना सम्बन्धी उक्त भिडियोमा यसका विशेषता तथा यस्ले …
बीमकलाई लिखित जानकारी दिन बीमा समितिको निर्देशन
काठमाडौँ । बीमा समितिले मोटर बीमाको हकमा यसअघि लागू भएको बन्दाबन्दीको अवधिलाई दृष्टिगत गरी बीमकलाई लिखित रुपमा पूर्वसूचना दिन आग्रह गरेको छ । समितिले निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई आज मोटर बीमाको दर निर्देशिकाका बारेमा जानकारी दिँदै गत चैत ११ गतेदेखि लागू भएको लकडाउनको घोषणा …